» कमेडी च्याम्पियनको उत्कृष्ट ४ मा सुमन कोईराला
कमेडी च्याम्पियनको उत्कृष्ट ४ मा सुमन कोईराला
५ फाल्गुन २०७६, सोमबार १८:०९
मकवानपुर, ५ फागुन । नेपालकै पहिलो स्टाण्ड अप कमेडी रियालिटी शो ‘कमेडी च्याम्पियन’को उत्कृष्ट ४ मा ईटहरकीका सुमन कोईराला छानिएका छन् । उत्कृष्ट ५ मा प्रस्तुति दिएका सुमन भोटिङका आधारमा उत्कृष्ट ४ मा प्रवेश गरेका हुन् । उत्कृष्ट ४ मा पुगेकाहरुको औपचारिक घोषणा सोमबारको शोमा हुनेछ तर यसअघि नै सार्वजनिक टेलरअनुसार उनी उत्कृष्ट ४ मा छानिएको तथ्य सार्वजनिक भएको हो । हेर्नुहोस् भिडियो–
उत्कृष्ट ४ मा यसअघि नै रोल्पाली कमेडियन खड्गबहादुर पुन मगर छनौट भईसकेका छन् । उनी पर्फोमर अफ द राउण्ड घोषित भएर उत्कृष्ट ४ मा छनौट भएका हुन् । उत्कृष्ट ५ मा भिडेका विष्णुप्रसाद गौडेल मेक्सम, हिमेश पन्त, खड्गबहादुर पुन मगर, सुमन कार्की र सुमन कोईराला मध्ये खड्गबहादुर पुन मगर र सुमन कोईराला उत्कृष्ट ४ मा परेका कारण अब बाँकी मध्ये २ जनामा को पर्नेछन् भन्ने बहस चल्न थालेको छ ।
अर्गानिक कमेडियनका रुपमा चिनिएका सुमन ईटहरी निवासी हुन् । उनी वाईल्डकार्ड राउण्डमा पर्फमर अफ द डे घोषित हुँदै उत्कृष्ट ७ मा परेका थिए । त्यसपश्चात उनी दले दाईका नामले चर्चित बनेका छन् । उत्कृष्ट ७ हुँदै उनी उत्कृष्ट ४ मा आईपुगेका छन् । उनी दुई पटक पर्फोमर अफ द राउण्ड घोषित भएका थिए । आदरणीय दर्शकविन्द तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? तपाईको विचारमा कमेडी च्याप्यिनको पहिलो विजेता को बन्नेछ ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।